Sagantaa virtual yaa’ii hagayya 15 bara 2020 gadgeeyfamu - Welcome to bilisummaa
Sagantaa virtual yaa’ii hagayya 15 bara 2020 gadgeeyfamu
bilisummaa August 2, 2020	Leave a comment
Kun maaliif deemsifama; duula sanyii daguuggaa kana irraa akkamitti Saba Oromoo baraaruu dandeenya? jedhnee wal marihachuun dhimma belbeltuu wanna taateef, mata-duree “Beekumsa hidhachuudhaan Oromoo fi Oromiyaa roorroo diinaa irraa haa baraarru!” jedhuun yaa`ii tokko qopheessineerra. Yaa`iin kun gaafa Hagayya 15, 2020, sa’aa 14:00 – 18:00 (akka lakkoofsa Berlin) kallattiin karaa „Stream Yard“ Mediyaalee Oromoo garaa garaa irratti tamsa’a. Lakkofsi yeroo Berlin 14:00 (2:00 PM) = Washington DC (8:00 AM), Melbourne VIC (22:00/10:00 PM), Johannesburg (14:00 /2:00 PM), East Africa (15:00 / 3:00 PM, Dubai (16:00 / 4:00 PM). Sagantaa yaa`ii ergaa kanaa jalatti qabsisuun isinii ergudhaan kabajaan isiin afeerra.
Injifannoon Ummata Oromoof! Oromiyaan ni bilisoomti!
Koree qindeessitu sagantaa yaa`ii
Previous Ethiopia before the assassination of Haacaaluu Hundeessaa and after could not be the same
Next Qabsoon Bilisummaa Oromoo (QBOn) Qeerroodhaan gaggeeffamaa jiru amma booda butamuu hinqabu!!